Dad badan oo Nigeri lagu dilay - BBC Somali
Dad badan oo Nigeri lagu dilay
Waxaa jirto cabsi ah in kooxda mayalka adag ee Boko Xaraam, ay ku dishay ugu yaraan 200 oo qof weeraro ay ku qaaday tuulooyin ku yaal waqooyi bari Nigeria.
Xildhibaan laga soo doorto deegaanka ayaa BBCda u sheegay, in laba maalmood kaddib markii ay maleeshiyada weerarka geysteen ilaa iyo hadda aanan wax ciidan ah halkaa la geyn.
Kooxda Boko Xaraam, ayaa weli waxa ay haystaan in ka badan 200 oo gabdho iskuuleey ah oo ay ka afduubteen iskuul ay ku xareysnaayeen oo ku yaal meel baadiya ah bishii Abriil.
Kaddib laba maalmood oo weerraro ay soo qaaday kooxda Boko Xaraam, ayaa meydadka weli waxa ay yaalaan wadooyinka dhowr tuulo oo ku yaal deegaanka Gwoza, ee u dhaw xuduuda ay Nigeria la leedahay waddanka Cameroon.
Xildhibaanka deegaankaasi laga soo doorto ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in ugu yaraan 200 oo qof halkaa lagu dilay, hasayeeshee aanay suurtagal aheyn in la ogaado tirada rasmiga ah ee dhimashada, sababtoo ah buu yiri ma ay jirto cid halkaa joogto oo tirisay meydadka.
Xildhibaanka ayaa sheegay in inkastoo ay codsadeen in ciidammada Nigeria halkaa la geeyo haddana aanay jirin cid weli halkaa la geeyay.
Gwoza, ayaa waxa ay noqotay meel ay aad ugu xoogan yihiin kooxda Boko Xaraam, waxaana jira warar sheegaya in calamada kooxda jihaadiga ay ka dulbabanayaan tuulooyinka qaar.
Weerrarada ayaa ah kuwa aan kala joogsi laheyn.
Habeen horana 45 qof ayaa lagu dilay daafaha magaalada Maiduguri, iyadoo shalay subaxna dagaalyanahada Boko Xaraam ay weerar ku qaadeen magaalada Madagali oo ah meel aan sidaa uga fogeyn Gwoza.
Ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidammada Nigeria ka cararaan kooxda xagjirka ah ee sida aadka ah u hubeysan.
Dadka rayidka ah ee ku nool waqooyi bari Nigeria ayaa lagu fiirsaday iyagoo ku jira xaalad aad u culus.
Hay’addaha gargaarka ayaa sheegay, in sanadkan ay kooxda Boko Xaraam ay dishay in ka badan 3,000 oo qof.
Dibadbaxyada oo laga mamnuucay Abuja
3 Juunyo 2014
2 Juunyo 2014
Maraykanka oo askar u diray Nigeria